Shirkii Teendhada Afisiyooni oo furmay | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii Teendhada Afisiyooni oo furmay
Shir udhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo gobolka Benaadir ayaa ka furmay teendhada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shir udhaxeeya madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa goordhow ka furmay Teendhada Afisyooni, iyadoo shirku yahay mid albaabada u xiran.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa markii u horeysay ka qeyb galaya shir uufadhiyi Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihiisa Rooble, kaddib shirkii Dhuusamareeb 4 oo kusoo dhammaaday natiijo la'aan!
Shirka maanta oo ah mid hirdhac u ah shirkii doorashada Soomaaliya looga heshiin lahaa ayaa la filayaa in looga wada hadlo ajandaha shirka soo socdo, is fahamka shirkan hordhaca ah laga gaaro ayay ku xiran tahay jawiga uu ku furmi doono shirka rasmiga ah ee ay Beesha Caalamku qaban-qaabisay.
Wadahadallada maanta ee horudhaca u ah shirka Teendhada Afisiyooni ayey dadka oo dhami u hanqal-taagayaan in uu mira-dhalo, waxaana laga dhur-sugayaa gabagabada shir yaraha maanta ka furmay xerada ciidamada cirka ee Afisiyooni.